Akụkọ - Shandong Gaoqiang nyere ego maka agụmakwụkwọ
"Ekelere onye isi njikwa Zhu, na-ekele Shandong Gaoqiang, anyị ga-amụ ihe nke ọma mgbe anyị banyere mahadum wee kwụghachi ọha mmadụ ...", "Daalụ Manager Zhu, kelee ụlọ ọrụ ahụ maka inyere anyị aka na ọrụ ọkụ nke obodo Jiujianpeng .. ., ekele sitere n'obi apụghị ịkwụsị ịnụ.
Emere onyinye onyinye na Jiujianpeng Village Committee dị na Pingyi County na August 26. Mr Zhu Mengshou, onye isi njikwa Shandong Gaoqiang New Material Technology Co., LTD nyere ụlọ ọrụ ọkụ na ihe ọkụ ọkụ ụmụ akwụkwọ ise dara ogbenye na Jiujianpeng na Pingyi County. Ihe karịrị mmadụ 10 gara emume inye onyinye nke ọrụ ọdịmma ọha mmadụ abụọ, gụnyere Zhang Guanlin, osote odeakwụkwọ nke kọmitii Kọmunist nke Pingyi County, Jiao Dale, odeakwụkwọ nke Kọmitii Party nke pingyi County, Ji Dayong, odeakwụkwọ mbụ nke Jiujianpeng, na Meng Ding, osote odeakwụkwọ nke Jiujianpeng.
N'ebe a na-enye onyinye, GM Zhu nyere yuan 4, 000 yuan nke ọ bụla n'ime ụmụ akwụkwọ ahụ dara ogbenye ise na-achọ ịbanye mahadum. Ọ gwara ụmụ akwụkwọ dara ogbenye, nwee nghọta miri emi banyere ọmụmụ ihe ha na ndụ ha, Kọọrọ ụmụ akwụkwọ ahụ ihe uto ya, wee kụziere ha ka ha nwee ekele mgbe niile maka ihe ha mụtara wee kwụghachi obodo ha na ọha mmadụ site na omume bara uru.
N'otu oge ahụ, mgbe ọ mụsịrị ọnọdụ akụ na ụba nke obodo Jiujianpeng site na mkparịta ụka ya na odeakwụkwọ Ji, onye njikwa Zhu nyere 10,000 yuan nke ego maka ụlọ ọrụ ọkụ na obodo. Jiujianpeng bụ onye isi obodo Liu Yuefeng kelere GM zhu maka ịhụnanya a, wee nye asambodo nsọpụrụ maka Zhu, obodo ahụ zigara odeakwụkwọ mbụ nke odeakwụkwọ nke oge ahụ ka ọ nye Zhu izugbe ịhụnanya ọrụ.
Na ngwụcha emume ahụ, General Manager Zhu kwuru: Kemgbe e guzobere ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10 gara aga, ụlọ ọrụ Gao Qiang na-agbaso echiche nke "iguzosi ike n'ezi ihe, ịrụsi ọrụ ike". Ọ bụ ezie na ị nweta mmepe akụ na ụba nke ụlọ ọrụ ahụ, ọ na-etinye oke mkpa iji kwụghachi ọha mmadụ, na-akwado ihe kpatara ilekọta ọgbọ na-abịa abịa, na atụmatụ ịme ihe ụfọdụ maka ọdịmma ọha na eze kwa afọ n'ọdịnihu. N'otu oge ahụ, ọ na-akpọkwa ndị ọchụnta ego na ndị na-elekọta mmadụ ka ha sonyere ndị ọrụ ọha na eze
Shandong Gaoqiang agaghị echezọ ebumnuche mbụ, debe ozi ahụ n'uche, na-aga n'ihu isonye na ọrụ ọdịmma ọha na eze, nyere ọtụtụ ndị chọrọ enyemaka aka, nyefee ịhụnanya, gaa n'ihu na-ede nnukwu obi, nye aka na isi ọhụrụ nke ọha mmadụ!